Hiran State - News: HS:-Madaxweynaha mustaqbalka Somaliya Professor Warfaa oo ka hadlay shirka Garoowe
HS:-Madaxweynaha mustaqbalka Somaliya Professor Warfaa oo ka hadlay shirka Garoowe
HS:-Madaxweynaha mustaqbalka Somaliya Professor Warfaa oo ka hadlay shirka Garoowe iyo xaalada uu dalku ku sugan yahay.
Musharaxa madaxweynimada Jamhuuriyada Federalka Somaliya Professor Ahmed Muumin Warfaa oo ku sugan magaalada Washington ee dalka Mareykanka oo aanu caawa la xiriirnay ayaa ka hadalay arimo badan oo ay ugu horeyso shirka Garoowe ee loogu magac daray wadatashi,shirkii Kampala Acord loogu magac daray iyo waliba xildhibaanada baarlamaanka.inkasta oo uu wareysiga dheeraa hadane waxaanu isku dayi doonaa in aanu dhawr qeybood ka dhigno.
Professor Warfaa oo ah amaba ka mid ah musharaxiinta u taagan iney sanadka soo socda la wareegaan hogaanka dalka hadii Alle idmo ayaa mar aanu la xariirnay ka hadlay arimo badan oo ay ugu horeyso xaalada uu dalka Somaliya ku sugan yahay waxuuna war bixintiisa ku bilaabay sidan.
Shirka ka furmay Garoowe ee ay marti galiyeen maamul goboleedka Puntland
Madaxweynaha mustaqbalka ayaa soo dhaweeyey shirka ka furmay magaalada Garoowe isagoo dhinaca kalena sheegey in shirka laga balaariyo sida uu hada yahay maadaama loo bixiyey shirka wadatashiga iyo aaya ka talinta umada Somaliyeed, waxuuna yiri hadii shirku yahay amaba magaca lagu qabtay uu yahay wadatashi waxey aheyd in laga soo qeyb galiyo qeybaha kala duwan ee bulshada rayadka sida.
7-Dhalinyarada iyo waxii la hal maala.
Professorka ayaa ku taliyey in arinta hadii ay wadatashi tahay aan dhawr maalmood wax badan lagu qaban karin waayo ayuu yiri shir la leeyahay waa wadatashi hadane 3 maalmood soconaya dadku ma wax bey saxiixaan mise waxa laga hadlayo ayey aqriyaan si ay waqti ay ku fahmaan u helaan? waa in la joogteeyo shirkaas lana balaariyo ayuuna hadalkiisa sii raaciyey inta ka maqane la keeno.
Mar aanu weydiinay bal sida uu u arko Qorshaha road mapka iyo shirkii Kampala ayuu ku jawaabay.
Shirkii Kampala Acord waxuu miro dhal noqon karaa in ay ka doodaan mudanayasha baarlamanka laakinse hadii heshiis dibada lagu soo galay hadane baarlamankii xiran yahay sidee ku dhaqan kalayaa? waa in la furo baarlamanka mudayaashane ay ka doodaan kii aan fahamsaneyna la fahamsiiyo kii fahamsana howlaha kale ee baarlamaanka horyaala ka shaqeeyo.
Mar aanu wax ka weydiinay baaarlamaanka kumeel gaarka.
Arinta kale ee uu madaxweynaha mustaqbalka ka dhawajiyey ayaa ah in mudanayaasha baarlamaanka ay yahiin 550 ayna leeyahiin 27 gudiyo kala duwan oo howlahan ka dooda kadiba u soo bandhiga mudanayasha baarlamanka iyadoo gudi kasta uu leeyahay shaqo u gaar ah sida uu qeexayo Dastuurka wadanka u degsan.mida kale waa in mudane kasta ixtiraamo midka kale ee xildhibaanka la ah. Professor warfaa aya sheegay in sidiisaba baarlamaan ayuu sheegay inuu leeyahay gudoomiye iyo ku xigeeno inta kalena ay yahiin mudanayal baarlaman waa lama huraan in la yareyo qilaafka soo noq noqda ee markasta cuuriyaamiya dantii guud ee dalka.
Ugu danbeyn madaxweynaha mustaqbalka ayaa sheegay in ay lama huraan tahay in si wada jir ah loo wajaho arinta Xawaaladaha oo hada dalka Mareykanka loo qabtay inta ka dhiman sanadka taasi oo saameyn ku yeelan doonta kumanaan Somali ah waxana dhibaatada rasmiga ah ee laga dhaxli doono xawaalahada oo la joojiyo ay saameyn ku yeelan doontaa dadka ku jira xeryahay qaxootiga, waalidiinta ay caruurtoodu wax ku bartaan wadamo badan oo ku yaala caalamka intiisa kale. waxuu ku taliyey madaxweynaha mustaqbalka in arintaan si wada jir ah loo wajaho guud ahaan shacabka Somaliyeed hadey noqon laheyd TFGda, musharaxiinta, ganacsatada, iyo dhamaan qurba joogta Somaliyeed ee iyagu caawiya eheladooda.
Professor Warfaa ayaa ku nuux nuuxsaday in ay Somaliya gasho dhaqaalo aan yareyn sanadkii amaba lagu qiyaaso 1.2 Billion, hadii la helay dhawr kun oo gacan qaldan ku dhacday micnaheedu maahan in rajada kaliya ee ay umadu heystaan la xiro maadaama uu dalku ku soo jiray dagaalo sokeeye mudona ay shacabku ku soo jireen abaaro iyo colaado joogto ah.
· admin on December 22 2011 02:31:36 · 0 Comments · 1948 Reads ·
14,586,029 unique visits